Khabiirka Xawaaladda wuxuu sharraxayaa kala duwanaanshaha Macaamiisha SEO iyo Mobile SEO
Suuq-geynta dijitalka, xeeladaha SEO intooda badan ma tixgeliyaan qalabka booqdayaasha ahadeegso si aad u gaarto websaydhka. Ganacsiyada intooda badan waxay si deg deg ah u iloobaan in ay wax ka beddelaan boggooda internetka ee waxqabadka taleefanka gacanta marka ay fulinayaanhorumarinta bogga. Daraasadihii ugu danbeeyay ayaa muujiyay in telefoonnada gacanta ay bedelayaan miisaaniyadaha si ay ugu fidinayaan internetka 4%. Intaas waxaa dheer,Qaar badan oo ka mid ah taraafikada raadinta ayaa ka imaanaya telefoonnada gacanta, ma aha ka hor PC-yada casuusyada - como administrar un hosting reseller.
Ganacsiyada qaar ayaa qaadaya faa'iidadaas si ay u buuxiyaan farqiga suuqa. Tusaale ahaan,inta badan shakhsiyaadka ayaa isticmaala taleefannada gacanta si ay ula socdaan internetka. Bishii Jannaayo ee sannadkan, Google ayaa caddaynaysa mid ka mid ah hababka ay algorithmbogagga internetka ayaa ah qaabka sida goobaha moobiilka ay uga jawaabayaan.
Raadinta Mashiinka Raadinta waxaa ka mid ah kordhinta muuqaalka internetka ee internetka.Mashiinnada raadinta ayaa ka qaybqaata geeddi-socodkan. Inta badan shuruudaha ay ka mid yihiin samaynta bogagga internetka ee bogga. Laga soo bilaabo horumarinta webkadhibicda aragtida, fikradaha ugu badan SEO ee bogagga internetka ee saaxiibtinimo mobile waxay si buuxda uga duwan yihiin sida version-ka shaqada shaqeeyaa.
Mobile SEO waa ka duwan yahay shaqada caadiga ah SEO. Khabiirka Sare Adeegyada Digital, Ross Barber wuxuu sharxayaa dhinacyada kala duwanaanshahan.
Localization natiijooyinka..Google si ulakac ah ayuu natiijooyinka maxalliga ah ugu dhigaa moobaylkaqalabyada. Hagaajinta Tani waxay ka dhigaysaa SEO-ga maxaliga ah ee ku habboon bogga internetka. Raadinta gawaarida la-rogay ayaa gaari kara qalabka moobiilka si ka dhakhso badanwaxay helayaan miisaska. Isla mar ahaantaana, habka la midka ah ee mashiinku wuxuu u horseedi karaa mawduucyo badan oo ku saabsan mawduucyo badan. Natiijo ahaan, badiShirkadaha ayaa iska indho-tiraya farqigan. Si kastaba ha noqotee, waad ka faa'iideysan kartaa tan adoo adeegsanaya adoo adeegsanaya shabakadaha kambiyuutarkaaga. Isla mar ahaantaana,Waxyaabaha ugu fiican ee aad ku dari lahayd boggaaga mobile waxay ku soo celinaysaa xiriiriyahaaga iyo boggaaga 301 dib udhexaadin.
Maareynta badhaxa talaabo-qaadasho. Inta badan dadka isticmaala bogagga waxay u aadaan bog internetka wixii macluumaad ah amaiibsashada. Taleefanada gacanta waxay u baahanyihiin badh aad u ballaadhan. Qalabkani wuxuu u oggol yahay dadka isticmaala akriga inayan dhib ku qabin shaashadoodatalooyin. Si kastaba ha noqotee, cursada caaradu waxay kala saari kartaa isku xirnaanta si isku mid ah oo guji mid kasta oo ku habboon.
Mawduuca. Dhaqdhaqaaqa suuq-geynta oo dhan, keywords iyo content waa fikradaha ugu muhiimsan.Raadinta Mashiinka Mashruuca wuxuu ka hadlayaa ereyada muhiimka ah iyo content. Si kastaba ha noqotee, habka hal xarumood ee ereyada muhiimka ah ee ku jira bogga internetka ma aha habkawaxay ku socotaa goobta desktop. Tusaale ahaan, miisaaniyadu waxay u baahan yihiin calaamad muhiim u ah iyo caymiska macluumaadka. Sababtan awgeed, mawduuca wuxuu awood u yeelan karaagaarsii ilaa 1000 erey oo aad ku qoran tahay font yar-yar si aad ugu dhex gasho koob quruxsan. Si kastaba ha noqotee, tani ma aha kiiska loogu talagalay mobile-kashabakadaha. Dukumiiyeyaasha telefoonka waxay si fiican ugu shaqeeyaan qoraalada waaweyn iyo nuxurka inta udhaxaysa 300 oo eray ilaa 700 erey.
Ganacsiyo badani waxay ku guuldareystaan ​​in ay keenaan waxqabadyo mobile ah marka la samaynayoshabakadaha. Waxaa jira siyaabo badan oo SEO-ga mobile-ka ay ka duwan tahay macaamiisha SEO. Tusaale ahaan, farsamooyinka moobiilka moobiilka ayaa u malaynaya isticmaalka yarwaxa ku jira qoraallo waaweyn oo ka soo horjeedda waxa Google ka rabo meeleynta content ee PC desktop. Ganacsiyo badan oo sameeyaygoobaha ay isticmaalaan mobile-ka ayaa horeyba uga soo jiidanaya waxtarka istaraatiijiyadan. Sidaa darteed, kala duwanaantaas waxay kaa caawin karaan ololeyaasha SEOsi loo kordhiyo gaadiidka iyo helitaanka martida ka badan qalab mobile.